जान्नुहोस् ! यस्तो छ सुर्य नमस्कार गर्नुको बैज्ञानिक रहस्य
जनवरी 4, 2019 अक्टोबर 17, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment बैज्ञानिक, सूर्य नमस्कार
सूर्य नमस्कार गर्नुको बैज्ञानिक रहस्य ! हिन्दू धर्ममा बिहान सबेरै उठेर सूर्य भगवानलाई नमस्कार गर्ने चलन रही आएको छ । बिहानको सूर्यको किरणमा हामीलाई चाहिने भिटामिन D र अरु पनि स्वस्थ्यलाई लाभदायक तत्वहरु रहेका हुन्छन । बिहानको सूर्यको किरणलाई पानीको मध्यमबाट अथवा सिधै हेरेमा पनि हाम्रो आँखा तेजिलो हुने कुरा बैज्ञानिकहरुले प्रमाणित गरेका छन् । बिहान सबेरै उठेर सूर्यलाई नमस्कार गर्ने बानी बसाल्यो भने हामीलाई बिहान उठ्ने बानी बस्छ र बिहान उठ्नुको फाइदाहरु त हामी सबैलाई थाहा नै छ ।
हिन्दू धर्मभित्र भएका परम्पराहरु केवल अन्धबिश्वास मात्र नभएर जिवन जिउने चाहिने कला पनि हो । हिन्दूधर्म भित्र यस्ता धेरै कुराहरु लुकेका छन् , जुन आजको बिज्ञानलाई बल्ल थाहा हुँदैछ । सूर्य नमस्कारकाे निरन्तर अभ्यासबाट मानसिक र शारिरीक रूपमा शान्त, पवित्र र स्वच्छ रहन धेरै नै सहयाेग पुग्छ । यसलाई मानिसहरूले आफ्नाे शारिरीक र मानसिक अवस्थालाई महसुस गरी सहजगताकाे साथ गर्नुपर्छ । बैज्ञानिकहरुले सुर्यको किरणले हामीलाई धेरै फाइदा हुने कुरा पत्ता लगाएका छन् । सूर्यको मदतले गर्ने उपचारलाई heliotherapy भनिन्छ । बिहानको सूर्यको किरणले हामीलाई गर्ने फाइदाहरु निम्न छन् :
१. सूर्यको किरणले हाम्रो हड्डी बलियो बनाउन मद्धत गर्छ ।
२. सूर्यको किरणले क्यान्सर लाग्नबाट जोगाउछ ।
३. सूर्यको किरणले हाम्रो पाचन शक्ती बढाउन मद्धत गर्छ ।
४ . सूर्यको किरणले हाम्रो शरिरलाई नचाहिने बोसो घटाउन मद्धत गर्छ ।
५ . सूर्यको किरणले आस्थामा दम लाग्नबाट पनि हामीलाई बचाउने गर्छ ।
६. बिहानैको सूर्यको किरणले हानिकारक जिवाणु र किटाणुलाई नष्ट गरेर हामीलाई स्वस्थ्य राख्न मद्धत गर्छ ।
← यसरी घरमै तयार गरौं प्राथमिक उपचार बक्स (First Aid Box)
दमको रोग र ईसबगोल भुसि →
One thought on “सूर्य नमस्कार गर्नुको बैज्ञानिक रहस्य”
Pingback:जान्नुहोस् ! यस्तो छ नमस्कार गर्नुको कारणहरु र महत्वहरु